आइपिएल फाइनलमा देखिएकी यी सुन्दर युवती सामाजिक सञ्जालमा भाइरल ! आखिर को हुन् उनी ! – MediaNP
काठमाडौँ । इण्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको १२औँ सस्करण सकिएकीसँगै आइपिएलमा उपस्थित भएकी एक युवती सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएकी छन् । फाइनल खेलमा चेन्नई सुपर किंग्सलाई एक रनले पराजित गर्दै मुम्बाई ईण्डियन्स च्याम्पियन बन्यो । अन्तिम बलमा २ रन चाहिएको अवस्थामा लासिथ मालिंगाले सार्दुल ठाकुरलाई एलबीडब्लु आउट गरेपछि मुम्बाई विजयी भयो ।